Isiokwu nke dengela de la Vieja na Martech Zone |
Edemede site na Gengela de la Vieja
Ángela bụ ọkachamara na nchịkọta azụmahịa, ịnye ọnụahịa na njikwa mgbasa ozi, na-eduga ọdịnaya n'ofe ọwa niile yana ijikwa ọnụnọ na ntanetị niile.
Tuzdee, Machị 10, 2020 Tuzdee, Machị 10, 2020 Gengela de la Vieja
Anyị niile maara na ịga nke ọma na oge ọhụụ nke azụmahịa dijitalụ na-adabere n'ọtụtụ ihe, yabụ itinye n'ọrụ ngwaọrụ dị oke mkpa. Ọnụahịa na-aga n'ihu na-abụ ihe mmezi ọnọdụ mgbe ị na-eme mkpebi ịzụta. Otu n’ime nnukwu nsogbu chere eCommerce azụmaahịa n’oge a na-agbanwe ọnụahịa ha ka ọ daba n’ihe ndị ahịa ha na-achọ oge niile. Nke a na - eme ka ọnụahịa dị ọnụ ahịa na - agbanwe agbanwe dị oke mkpa maka ụlọ ahịa dị n'ịntanetị. Dynamic ịnye ọnụahịa azum, na mgbakwunye na